4-Talooyin oo Ku Saabsan Wax Soo Saarka Beeraha | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Allow Gun Wax Ha Innoogu Dhiibin – Qiso dhab ah!
Astaamaha Guul Lagu Gaadho
Jama Hursow — December 2, 2018
Beeraha Soomaaliya waxa kasoo go’a dalagyo iyo qudaar farabadan, taas oo beeraleeyda magaalooyinka u suuq-geeyaan. Qudaartaas dabcan waxa iibsada maqaaxileyda, dukaamanka iyo macaamiil kale haba ahaadaan kuwa kale ee sii iibgeeya.
Qudaarta waxa lagu yaqaanaa in marka ay soo go’do durbadiiba in la isticmaalo ay ku fiicantahay ama in markaas la xanaaneeyo, si aysan u halaabin. Hadaba talooyinkaan hoos ku xusan raac si ganacsigaaga u wanaagsanaado isla markaasna cunto wanaagsan ee wax tar leh aad usoo saartid.
Qudaarta marka ay soo go’do waxa u daran dhowr waxyaabood oo inta badan cimiladu sababto. Waxa ka mid ah qoraxda iyo dabeeysha. Waxa jira siyaabo kaladuwan ee qudaarta uga badbaadi karto dhamaan cimiladaas, taas oo ah dayactir iyo qaboojin.
Qudaarta marka ay soo go’do waa inaad dhaqdaa, laakiin waa inaad ka illaalisaa in dhaawac gaaro. Haddii aad dhaqdo keemikada ayaa kabaxayso, macaamiisha markaas iibsanaya marka ay arkaan quruxda qudaarta durbadiiba waa lagaa iibsanayaa.
Qaboow ku haay isla markaasna dabool (Keep cool and covered). Dhammaan qudaarto waxay jeceshay in qaboow lagu haayo, qaasatan (soft fruit) miraha iyo waxa la midkaa aad ayeey muhiim ugu tahay qaboowga. Taasi waxay keenaysaa in waxbadan kuu yaalaan iyo in waliba aad ka dabooshay cayayaanka.
“Investing in suitable equipment can be a long-term savings, if you plan on selling fresh produce frequently in hot climate, especially in Somalia.”
Kiisa jilican ku rid weel kuhaboon. Iskuday inad ilaalisid oo kala saartid qudaarta markaas kiisa liita meel gooni ah gurid, kiisa wanaagsan meel kale asna kurid. Hadba markaas waxaad haysato u isticmaal sidda baco, kartooman iwm. Maxaa yeelay haddii mid dhaawac ah aad ku rido mid kale waxa uu kaa haleeynaa kuwii fiicnaay ama wanaagsanaay.
Qudaarta qaar inaad xididada biyo u gelisid ama aad ku waraabisid waxay siinee inay cagaar sii ahaadaan iyo waliba inay sii ahadan fresh.
Haddii aad waxbadan soo saartid waxaan kugula talinayaa inaad sameeysatid macaamiil kaa iibsada. Waxaad xiriir ganacsi la sameey kartaa maqaaxiyaasha, dukaamanka, kuwa sii iibgeeya iyo waliba dowlada dhexe oo markaas siineeysa ciidamada iyo markaas meelaha markaas cunta yarida kajirto ee lagu kaalmeeynayo. Haddii aad awoodo waxan kugula talin lahaa inaad iibsatid qaboojiyaal iyo inaad lee dahay bogg ama website markaas lagaala soo xiiriiro. Waxa kordhaya macaamiishaada iyo ganacsigaaga hadiiba aad wax ka bedeshid hadba sida ganacsigaagu yahay.
Soomaaliya waa wadan barwaaqa ah oo dhulkiisa la beeran karo afarta xili ee sanadka ka koobanyahay. Halka fursadaas aysan wadamo badan haysan. Waxaad ogaataa dunidaan ruux walba waxa uu u ordaayo inay tahay cunto, la’aanteedna nololi jirin.
Hadiiba, wax soo saarka Soomaaliya la xoojiyo dhammaan maamul iyo shacab, waxa yaraanaya baahida faraha badan ee wadanku qabo, qiimaha wadanku leeyahay, sharaftiisa iyo dhaqaalahiisa ayaa sare u kacaaya marka labar-bar dhigo wadanka aan wax soo saarin. Aduunka waxa uu tartan xoogan ugu jiraa in wax soo saarkiisa kor u qaado islamarkaasna dalagyada ay soo saaraan u iibgeeyaan adduunka dacaladiisa.
Tags: 4-Talooyin oo Ku Saabsan Wax Soo Saarka Beeraha
Next post Talow Kaalaya Maanta Iga Celiya Malakulmowt!
Previous post Dhaqan Dhumay iyo Dhalanteed Bilowday, oo Ay Dhalintu Horboodayso!!